» “गोकुल तिमी फर्केर आउ यो देशलाई तिम्रो खाचो छ”को हुन् ती युवा ? जस्ले 70 करोड को भ्रष्टाचार गर्ने गोकुल लाई निर्दोष सबित गर्दौ यसो भने? हेर्नुहोस “गोकुल तिमी फर्केर आउ यो देशलाई तिम्रो खाचो छ”को हुन् ती युवा ? जस्ले 70 करोड को भ्रष्टाचार गर्ने गोकुल लाई निर्दोष सबित गर्दौ यसो भने? हेर्नुहोस – हाम्रो खबर
“गोकुल तिमी फर्केर आउ यो देशलाई तिम्रो खाचो छ”को हुन् ती युवा ? जस्ले 70 करोड को भ्रष्टाचार गर्ने गोकुल लाई निर्दोष सबित गर्दौ यसो भने? हेर्नुहोस
काठमाडौ ।हो ,मलाई पनि लाग्थ्यो तिमीले त्यसो गरेउ कि भन्ने किनकी म तिम्रो बारेमा धेरै जानकार थिईन । जब तिम्रा बारेमा यति धेरै नफरतका ज्वाला निस्कन थाले अनि मलाई तिम्रो बारेमा जान्ने जिज्ञासा जाग्न थाल्यो । किनकी, म जहिले पनि जिज्ञासु छु ।
तिमिबाट त्यो काम भएको हुन सक्दैन । किनकी, तिम्रो स्वभाव त्यस्तो हैन छैन र रहेनछ । मलाई लाग्थो पार्टी फरक हुँदा बिरोध गरिन्छ । तर मलाई थाहा भयो त्यसो हैन रहेछ । आज काभ्रेमा कुनै पार्टी हैन, सारा काभ्रेली जनता चिन्तित रहेछन् । किनकी, उनीहरुले देशको राजनितीमा भूमका खेल्न सक्ने नेतृत्व आज राम्रो काम गर्दा गर्दै संकटको सामना गर्दै गरेको देखेका छन्।